May 2018 – Page 51 – PwintsSan
ရုပ်ရှင် လုံးဝမရိုက်ချင်တော့ပါဘူး’’ လို့ ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်
May 4, 2018 twl 0
နာမည်ကြီးမင်းသမီး အိန္ဒြာကျော်ဇင်တစ်ယောက်ကတော့ ပရိတ်သတ်တွေ အံ့သြလောက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ရင်ဖွင့်ပြီး ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ ထင်မှတ်မထားတဲ့ စကားတစ်ခွန်းဖြစ်သည်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင်က သူမ၏ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာတွင် ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ချ ပြောဆိုလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ‘’ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင်ကျွန်မရုပ်ရှင်လုံးဝမရိုက်ချင်တော့ပါ…. အခုလာဌားတဲ့ဇာတ်ကအရမ်းကောင်းတဲ့ဇာတ်တစ်ဇာတ်ပါ… ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရေးတဲ့စာအုပ်တွေထဲကဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်…လုပ်နိုင်ရင် အကယ်ဒမီမှန်းလို့ရတဲ့ဇာတ်မျိုးပါ…. ဒါမဲ့ ပြင်ဦးလွင်မှာ တစ်လသွားရိုက်ရမယ်… […]
ထားဝယ်တွင် အိမ်စီးကားတိမ်းမှောက် သံဃာတပါး အပါအဝင် ၂ဦးသေ ၂ ဦးဒဏ်ရာရ
ထားဝယ်တွင် အိမ်စီးကားတိမ်းမှောက် သံဃာတပါး အပါအဝင် ၂ဦးသေ ၂ ဦးဒဏ်ရာရ 4.5.2018 မေလ၃ ရက် ည ၁၀နာရီခွဲခန့်က ထားဝယ်မြို့နယ် အလယ်ကုန်းရွာနှင့် ကူးတို့ရွာကြားတွင် ထားဝယ်ဖက်မှ သရက်ချောင်းဖက်သို့မောင်းနှင်လာသော အိမ်စီးကားတစ်စီး အရှိန်လွန်တိမ်းမှောက်ခဲ့သည်။ ကားလမ်း၏ လက်ဝဲဖက်ရှိ ဓာတ်တိုင်ကိုဝင်တိုက်ပြီးနောက် ပေ ၃၀၀ခန့်အထိ လွင့်စင်ခဲ့သည်။ […]
ယောက်ျားသုတ်ပိုး အလှူခံမယ် ဆိုတဲ့သတင်းကို ရှင်းလိုက်တဲ့ ပိုပို
နာမည်ကျော် အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပိုပိုကတော့ ယောက်ျားသုတ်ပိုးကို အလှူခံပြီး ကလေးယူမယ်လို့ ဖေ့စ်ဘွက်မှာပြန့်နေတဲ့ သတင်းကို ရှင်းလိုက်ပါတယ်။ စောင့်ကြည့်သတင်းမီဒီယာနဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ အိမ်ထောင်မပြုဖြစ်ရင်လည်း သုတ်လှူခံပြီး ကလေးယူချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကြီးနဲ့ ဒီသတင်းဟာ ပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်ပြီး ရှင်းချက်ကို ပိုပိုက ဒီနေ့ပဲ ဖေ့စ်ဘွက်ကနေ ရေသားလိုက်တာပါ။ ကျမ က […]
သင်ဟာ နေ့လယ်နေ့ခင်း တစ်မှေးအိပ်တတ်သူ ဖြစ်ပါသလား။ ဒါဟာ သင့်ကို ကောင်းကျိုးဖြစ်စေလား၊ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေလား ဆိုတာကိုရော တွေးမိဖူးပါသလား။ ‌ နေ့ခင်းအချိန်‌‌တွေမှာ မကြာခဏ တ‌စ်မှေးအိပ်‌စက်‌ခြင်းက သင့်‌ကို ဆီးချို‌ရောဂါနဲ့ နှလုံး‌သွေး‌ကြောနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများလာစေတယ်လို့ အမေရိကန်အ‌ခြေစိုက်‌ ကျန်းမာရေးစာစောင်တစ်ခုက ရေးသားဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအချက်တွေဟာ […]
အမေရိကန်ရဲ့ iPhone ကို China မှာ ထုတ်လုပ်နေတာ ဘာကြောင့်လည်း (ဖတ်ကြည့်ဗျာကောင်းတယ်)
(၂၀၁၀) ခုနှစ်လောက်မှာ အမေရိကန်သမတ အိုဘားမားက ညစာစားပွဲတခုမှာ. Appleကုမ္ပဏီရဲ. CEOဖြစ်တဲ့ Steve_Jobs (စတစ်ဗ်) ကိုမေးပါတယ်။ Appleရဲ့Products တွေဖြစ်တဲ့. iPhone တို့. iPadတို့ကို. တရုပ်ပြည်မှာ သွားထုတ်လုပ်နေ တာကို (အမေရိကန် လူမျိုးတွေ အလုပ်ရအောင်). အမေရိကန် ကိုပြောင်းလာရင်ဖြစ် မလားလို့မေးတယ်။. စတစ်ဗ်က.မဖြစ်နိုင် […]
ထမင်းစားပြီးဖြစ်စေ ရေသောက်တဲ့အကျင့်ရှိရင် ဒီပို့ကို ကျော်မသွားပဲ ကြည့်သွားပါနော်
ရေနွေးကြမ်းနှင့် နှလုံးခုန် ရုတ်တရက် ရပ်တန့်ခြင်း ဒီဆောင်းပါးလေး ဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေး နဲ့ ပက်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ။ ထမင်းစားပြီးတိုင်း ရေနွေးသောက်ဖို့သတိပေးတာ တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပဲ နှလုံးခုန် ရုတ်တရက် ရပ်တန့် စေတဲ့ရောဂါကိုလဲ သတိပေးရာ ရောက်ပါတယ်။ […]
“ဒူးရင်းသီး စားခြင်းနှင့် စောင်ရန် ရှောင်ရန် သတိပြုရန်များ”…
ဒူးရင်းသီး စားခြင်းနှင့် စောင်ရန် ရှောင်ရန် သတိပြုရန်များ” အစားမတော်တစ်လုတ် (ဒူးရင်းသီးပေါ်ချိန်မို့ ဖတ်ထားသင့်တဲ့ပိုစ့်ပါ) အသွားမတော်တစ်လှမ်း အစားမတော်တစ်လုတ်’ ဆိုတဲ့စကားပုံဟာ အစားအသောက် စားသုံးရာမှာ အခန့်မသင့်ရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တာကိုဖော်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ရာသီစာဖြစ်တဲ့ ဒူရင်းသီးဟာ အစားမတတ်ရင်ဘေးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒူရင်းသီးဆိုတာက အသီးတကာတို့ရဲ့ဘုရင်လို့တင်စားရလောက်အောင် အနံ့အရသာ ပြည့်စုံရုံမျှမက အားအင်ဖြစ်စေနိုင်သော သစ်သီးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒူရင်းသီးဟာ […]
​ငွေ​ကြေး လာဘ်​ပွင့်​စေရန်… မခက်​ပါဘူး လုပ်​ကြည့်လိုက်​ပါ. မခက်​ပါဘူး လုပ်​ကြည့်​ပါ လွယ်​သ​လောက်​ အစွမ်းထက်​…#​ငွေ​ကြေး လာဘ်​ပွင့်​ရန်​ အဝကျယ်​​သော စတီး ခွက်​ထဲတွင်​ … #ဆန်​ #သကြား #ဆား ၃မျိုးကို ဆတူ ထည့်​ပြီး အလယ်​တွင်​ #အပ်​ ၁​ချောင်းကို အချွန်​အား အ​ပေါ ဘက်​သို့ […]
အခြားသော ဖျော်ရည် ယမကာတွေအစား ရေကိုအစားထိုးသောက်ပါက သင်ဘာတွေပြောင်းလဲလာမလဲ
ရေဟာ ကော်ဖီ,လက်ဖက်ရည်,အချိုရည်,အရက်နှင့်ဘီယာစတာတွေထက် ကျွန်ုပ်တို့ကျန်းမာရေးကို ပိုမိုကောင်းကျိူးပေးတာ သိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ပါအရည်များအစား ရေတစ်မျိုးတည်းကိုသာ အစားထိုးသောက်ပါက ဘယ်လို ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေရနိုင်လဲ လေ့လာကြည့်ပါစို့။ (1)ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း ရေသီးသနိ့ကို ၉ရက်ဆက်တိုက်သောက်ပါက တနေ့ကို၈ကီလိူမီတာ ရွရွပြေးခြင်းနဲ့ ညီတဲ့ ကယ်လိုရီတွေကိုကျဆင်းစေပါတယ်။ (2)စွမ်းအင်ရခြင်း ရေဟာ စွမ်းအင်ဖြိုခွဲခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုမြန်ဆန်စေပြီး လိုအပ်တဲ့ စွမ်းအင်ပမာဏကိုရစေပါတယ်။ (3)ဦးနှောက်စွမ်းရည်တိုးတက်ခြင်း ဦးနှောက်ကို […]
.ဖြစ်ရလေ အဲ့လောက်တောင်ကောင်းရလား ရေမွှေးရယ်
ဖစ်ရလေ အဲ့လောက်တောင်ကောင်းရလား ရေမွှေးရယ် 😪😂😭😪😂 ရေမွှေးအရောင်းကောင်တာတစ်ခုတွင်ဖြစ်သည်။ “ညီမရေ အစ်မကိုအကောင်းစားရေမွှေးတစ်ပုလင်းလောက် ပြပေးပါလားကွယ်..” “အော် ဟုတ်ကဲ့အစ်မ..အဲဒီအမျိုးအစားလေးယူပါလားအစ်မ.. ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ်..တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ရှင့်.. အစ်မကိုယ်မှာဆွတ်ထားလို့ရှိရင် အနားမှာရှိတဲ့ အစ်မအမျိုးသားမှာပါတစ်နေကုန်သင်းပျံ့မွှေးနေစေပါတယ်ရှင့်..” “တော်ပါပြီအေ အဲဒီရေမွှေး..” “ဟင် ဘာဖြစ်လို့လည်းအစ်မ..” “အစ်မအရင်တစ်ခါဝယ်သုံးဖူးပါတယ်ကွယ်.. အစ်မဆွတ်လိုက်ရင်အနားကအစ်မအမျိုးသားဆီမှာ အနံ့တွေသင်းပြီးတော့ အိမ်ဖေါ်ကောင်မလေးဆီမှာပါအနံ့တွေကူးနေလို့..” […]